အမျိုးသမီးနှစ်ဦး သီလရှင်ကျောင်းတွင် အိပ်နေစဉ် ဓားထိုးခံရ
5/04/2014 03:37:00 PM crime-news
သန်လျင်မြို့မရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ် မျိုးမင်းသန်းနှင့် အဖွဲ့သည် ဧပြီ ၃၀ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီက သန်လျင်ဆေးရုံတွင် ဓားထိုးခံထားရသည့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦး ရောက်ရှိနေကြောင်း သတင်းအရ သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ဓားထိုးခံထားရသူ နှစ်ဦးမှာ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် မယုဒါလီနိုင်နှင့် အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် မမူမူဝင်းချိုတို့ဖြစ်ပြီး ပျဉ်ထောင်ကျေးရွာရှိ ဒေါ်ပုသီလရှင်ကျောင်း၌ အိပ်နေစဉ် နံနက် ၄နာရီခန့်တွင် ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီမောင်းနှင်သူ ကျော်ကျော် (ခ)ကျော်မင်းအောင် ၃၁နှစ်ရောက်ရှိလာပြီး အသင့်ပါလာသည့် ဓားဦးချွန်ဖြင့် ထိုးခဲ့သဖြင့် မယုဒါလီနိုင်တွင် နောက်စေ့၊ ယာလက်ဖျံ၊ ယာချိုစောင်း ထိုးသွင်းဒဏ်ရာနှင့် မမူမူဝင်းချိုတွင် နောက်စေ့၊ ဝဲလက်မောင်း၊ ဝဲနံရိုးတို့တွင် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာများရရှိကာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ တင်ပို့ ကုသစဉ် သေဆုံးခဲ့ ၍ အရေးယူပေးရန် တိုင်ကြားခဲ့သဖြင့်သန်လျင်မြို့မရဲစခန်းက အမှုဖွင့်အရေးယူ ထားကြောင်း သိရသည်။
5/04/2014 11:56:00 AM knowledge
စကားပြောတတ်တာက တစ်ပါးသူကို နွေးထွေးမှုဖြစ်စေတယ်၊ အားဖြစ်စေတယ်၊ ယုံကြည်မှုရှိစေတယ်၊ အဆင်ပြေစေတယ်၊
နေသာထိုင်သာရှိစေတယ်၊ မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်စေတယ်၊ အသိဉာဏ်ဖြစ်စေပါတယ်။
(၁) တစ်ဘက်လူရဲ့ဒေါသမီးကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တဲ့စကားလုံး ----- ဆောရီးပါနော်
(၂) ကိုယ့်ပင်ကိုအရည်အသွေးကို နှိမ့်ချတဲ့စကားလုံး ------ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
(၃) တစ်ဘက်လူကို ရင်ကော့အားဖြစ်စေတဲ့စကားလုံး ----- မင်းလုပ်တာ ကောင်းတယ်
(၄) ကျေအေးငြိမ်းချမ်းမှုကို ဆင့်ခေါ်နိုင်တဲ့စကားလုံး ------ ငါ မှားသွားတယ်
(၅) ဒီလောကမှာ ရှင်သန်တည်ရှိနေတယ် (လူရာဝင်နေသေးတယ်)ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့စကားလုံး ----- မင်း အကောင်းဆုံးပဲကွာ
(၆) စိတ်ခံစားချက်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့စကားလုံး ----- ဒီနေ့မင်းဝတ်ထားတာ မိုက်တယ်ကွာ၊ ဒီနေ့မင်းသိပ်မိုက်တယ်ကွာ
(၇) အကောင်းဆုံးအဆုံးသတ်ကို ဖြစ်စေနိုင်မယ့်စကားလုံး ------ နင်ရဲ့ အတွေးစိတ်ကူးကရော ဘယ်လိုလဲ
(၈) နွေးထွေးနှစ်သိမ့်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့စကားလုံး ------ ငါကူညီဖို့ လိုအပ်သလား
(၉) တစ်ဘက်သားရဲ့မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့စကားလုံး ------- ဟာ... ဒီစိတ်ကူးမိုက်တယ်ကွာ မင်း ဘယ်လိုတွေးလိုက်တာလဲ
(၁ဝ) စိတ်အားထက်သန်မှုကို တသွင်သွင်စီးဆင်းစေနိုင်တဲ့စကားလုံး ------ အသက်ဆိုတာ ကိန်းဂဏာန်းလေးပါကွာ
(၁၁) ခွန်အားတွေကို ပြည့်ဖြိုးစေနိုင်တဲ့စကားလုံး ------- နင့်ကို ငါယုံကြည်တယ်
(၁၂) ရဲစွမ်းသတ္တိတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့စကားလုံး ------ မင်း လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ငါယုံတယ်
(၁၃) လက်ဖွဲ့အဆောင်ထက် ပိုအသုံးဝင်နိုင်တဲ့စကားလုံး ------ မင်းအတွက် ငါဆုတောင်းပေးနေတယ်
(၁၄) သတိပေး၊ အကြံပေးစကားထက် ပိုအကျိုးရှိနိုင်တဲ့စကားလုံး ------- အမြဲတမ်း အဆင်ပြေမနေတတ်ဘူးနော်
(၁၅) ငွေကြေးပေးဝယ်စရာမလိုဘဲ ကောင်းတဲ့ခံစားချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့စကားလုံး ------- မင်းနဲ့အတူရှိနေရတဲ့ခံစားချက်က သိပ်ကောင်းတယ်ကွာ (မင်းနဲ့အတူရှိနေရတာ စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းတယ်ကွာ)
(၁၆) သားသမီးတွေရဲ့ ရှေ့ဆက်လျှောက်မယ့်လမ်းကို အားပေးနိုင်တဲ့စကား ------- သားအတွက် ဖေဖေဂုဏ်ယူတယ်ကွာ
(၁၇) သတ္တိကို အသစ်တစ်ဖန်ပြန်မွေးဖွားစေနိုင်တဲ့စကားလုံး ------- ကိစ္စမရှိပါဘူး... အရာအားလုံး ပြန်ကောင်းလာနိုင်ပါတယ်
(၁၈) တစ်ဘက်သားကို တခြားလူထက် တမူထူးတဲ့ခံစားချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့စကားလုံး ----- တကယ်ပဲ မင်းကတော့ စံပဲကွာ
(၁၉) ချစ်ခင်သူတွေကို ဂရုစိုက်မှုတွေပေးနိုင်တဲ့စကားလုံး ------- ငါ့ဘဝမှာ မင်းရှိနေတာ တန်တယ်ကွာ
(၂ဝ) တစ်ဘက်သားရဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကို နှစ်သိမ့်ပေးနိုင်တဲ့စကားလုံး ----- ဒီနေ့ရက်တွေမှာ မင်းတော်တော်ပင်ပန်းပြီကွာ
စကားကို လူတိုင်းပြောတတ်တယ်.. ဒါပေမယ့် စကားအကောင်းကို လူတိုင်းမပြောတတ်ကြဘူး...
5/04/2014 11:49:00 AM learn-english
(1) Don't fly without wings!
(3) What's with you?
(4) Draw it mild!
လိုရင်းကိုပဲ .. ပြော။
(5) How annoying!
(6) No need to apologize!
(7) Just relax!
(8) Hold everything!
(9) Near miss!
(10) Cut the comedy!
(11) Let bygone be bygone!
(12) Go fly your kite!
(13) It's groundless!
အဲဒါ အခြေအမြစ် မရှိပါဘူး။
(14) Here's to you!
(ဖန်ခွက်ကို ကိုင်မြှောက်ပြီး ဆုတောင်းပေးတာ)
(15) All the best!
လုပ်ငန်းခွင်တွင် ခေါင်းကိုက်ပါက အလွယ်တကူပျောက်ကင်းစေမည့် နည်းလမ်း
5/04/2014 11:39:00 AM health-news
ဓာတုလက်နက် တားဆီးပ်ိတ်ပင်ရေးစာချုပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လက်ရှိအစိုးရသက်တမ်းအတွင်း အတည်ပြုချုပ်ဆိုနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထား
5/04/2014 11:33:00 AM Myanmar-news
ဓာတုလက်နက် တားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လက်ရှိအစိုးရသက်တမ်းအတွင်း အတည်ပြုချုပ်ဆိုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် ခြောက်နိုင်ငံကို ဓာတုလက်နက် တားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး(သို့မဟုတ်)အပြည့်အ၀အတည်ပြုချုပ်ဆိုရန် မကြာသေးမီက တိုက်တွန်းပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဓာတုလက်နက် တားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်ကို ၁၉၉၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁၄ ရက်က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ဓာတုလက်နက် တားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်တွင် နောက်ဆက်တွဲ သဘောတူညီချက် သုံးခုရှိကြောင်းနှင့် စစ်ဆေးကြပ်မတ်သည့်အပိုင်းတွင် မည်သို့ ဆောင်ရွက်ရမည်ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းစဉ်များ အသေးစိတ်တိတိကျကျဖော်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
“လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက် Ratify လုပ်တဲ့အဆင့်ကို ဆက်ပြီးသွားနိုင်ဖို့ ဒီကွန်ဗင်းရှင်းနဲ့အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မယ့် ပြည်တွင်းတည်ဆဲဥပဒေတွေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီအပိုင်းကိုလည်း အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ ဆောင်ရွက်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်”ဟု အဆိုပါအဆင့်မြင့်အရာရှိက ပြောကြားသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၌ ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းတစ်ရပ်ကို စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက တင်သွင်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ဥပဒေကြမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံက လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရန် အဓိကဖြစ်ကြောင်း၊ ကျန်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပိုင်းတွင်လည်း ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ထားမှုများ၊ ထွက်ပေါ်လာမည့် ဥပဒေ နှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများက ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
]]နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအနေနဲ့ ဒီကွန်ဗင်းရှင်းကို အတည်ပြုဖို့လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအနေနဲ့ သူ့သက်တမ်းကာလမှာပဲ Ratification လုပ်သွားဖို့ ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေတွေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ခိုင်ခိုင်မာမာအတည်ပြုနိုင်မယ်ဆိုရင် မကြာခင်အတည်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်မှန်းထားပါတယ်”ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိက ပြောကြားသည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ဟိဂ်မြို့၌အခြေစိုက်သော ဓာတုလက်နက်များတားဆီးရေးအဖွဲ့(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - OPCW) သည် မြန်မာအစိုးရ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ နေပြည်တော်သို့ နည်းပညာအထောက်အကူပြု ခရီးစဉ်အဖြစ် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီက သုံးရက်ကြာ လာရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
OPCWျ သည် ဓာတုလက်နက် တားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ် (Chemical Weapons Convention-CWC) ကို အကောင်အထည်ဖော်သည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ပထမကမ္ဘာစစ်တွင် ဓာတုလက်နက်များကို ပထမဆုံးစတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် အီရတ်နိုင်ငံဟာလာဂျာ၌ အရပ်သားများကို ဓာတုလက်နက်ဖြင့် တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီတွင် ပါရီ၌ ဓာတုလက်နက် တားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်(CWC)ကို ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ၁၉၉၇ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၉ တွင် CWC စတင် အာဏာသက်ဝင်ခဲ့သည်။
လောလောဆယ်တွင် OPCW ၌ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံအားလုံးနီးပါး ပါဝင်သော အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၁၉၀ ရှိသည်။ ကမ္ဘာတွင် ကြေညာထားသော ဓာတုလက်နက်များ၏ ၈၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ဖျက်ဆီးထားကြောင်း OPCW ၏ ၀က်ဘ်ဆိုက် တွင် ဖော်ပြထားသည်။
5/04/2014 11:25:00 AM Myanmar-news
အာဘွား ဗီစီဒီအတွက် အရင်အခွေတွေထက် ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း
5/04/2014 11:06:00 AM celebrity-news
အနုပညာရှင်တွေထဲမှာမှ အိမ်ထောင်သည် ဘ၀နဲ့ အနုပညာ သရုပ်ဆောင်မှုအပိုင်း အပြင် ဂီတ ဖက်ကို ပါ စွမ်းစွမ်း တမံ ကြိုးစား လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူမကတော့ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အိမ်ထောင်ရှင် မတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပေမဲ့လဲ အနုပညာနှစ်ဖက်စလုံးကို မလျော့သော ဇွဲ ၊ လုံ့လနဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ကြိုးစားနေပေးဆပ်နေသူမို့ သူမနဲ့ တွေ့ဆုံခိုက် သူမရဲ့လတ်တလောအနုပညာအကြောင်းအရာများအပြင် သူမရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်းမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့တာကတော့ ‘ခု ၀ိုင်းစုက သန်ဘက်ခါမှာ မေမြို့တက်ဖို့ရှိတယ်။ ဗီဒီယို ၂ကားသွားရိုက်ရမှာပေါ့။ မြင့်မြတ်နဲ့ပါ။ တစ်ကားက ဖန်စီ၊ တစ်ကားက ဒရာမာဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ ဇာတ်ကားနာမည်တွေကတော့ မသိရသေးဘူးပေါ့နော်။ ဟိုရောက်မှ သိရမှာဆိုတော့လေ။ အဲနှစ်ကားတော့ မေမြို့မှာ သွားရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်’လို့ သူမက ပြောပါတယ်။
သူမရဲ့ ဂီတလှုပ်ရှားမှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့လဲ ၀ိုင်းစုက ‘အာဘွား အခွေကတော့ တစ်ပုဒ်ပဲ ရိုက်ရသေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါရိုက်တာ အားမဲ့ရက်နဲ့ ၀ိုင်းစုအားမဲ့ ရက်က မတိုက်လို့လေ။ ဒီ မေမြို့က ပြန်လာပြီးမှ ပဲကျန်တဲ့အပုဒ်တွေဆက်ရိုက်ရမယ်။ ဒီအာဘွားအမ်တီဗီမှာတော့ ၀ိုင်းစု တော်တော်များများ သရုပ်ဆောင်ဖြစ်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မျက်လှည့်အခွေမှာတုန်းက အမ်တီဗီထွက်တော့ ၀ိုင်းစု သရုပ်ဆောင်တာနည်းတယ်လို့ ပရိသတ်တွေက ၀ိုင်းပြောကြတယ်လေ။ ဒီအာဘွား မှာတော့ ၀ိုင်းစုတစ်ဝက်လောက် သရုပ်ဆောင်မယ်။ ပြီးတော့ အရင်ခွေထက်လဲ ပိုပြီး အမ်တီဗီကို အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခုဆိုတော်တော်များများက အမ်တီဗီတွေကို အဓိက ထားပြီး သေချာလေးရိုက်ကူးကြတာဆိုတော့ ၀ိုင်းစုလဲ တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်ရိုက်ပါမယ်။ ပြီးတော့ ခု ၀ိုင်းစုလုပ်နေတဲ့ Valentine အခွေကိုလဲ အမြန်ဆုံးထွက်နိုင်အောင်လုပ်မယ်။ အဲဒီအခွေက ၀ိုင်းစုထွက်မယ်ထွက်မယ်နဲ့ ၃နှစ်ရှိသွားပြီ။ ကြာနေတာက အဲဒီတော့ ဒီနှစ် ချစ်သူများနေ့အမှီကို ထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်’တဲ့။